NY ASA FITSABOANA, ...
Ny asa fitsaboana, ilaina olona tena malina ;
Na amin'ny antoadro, na koa amin'ny alina.
Mila fahavononana, amin'ny fotoana rehetra ;
Manery foana ny hianatra, ka aina no fetra.
Ny asa fitsaboana, asa iray mila ny fitoniana ;
Fanajana ny marary, fa tsy ny fanambaniana,
Amin'ny fotoana rehetra, izay hifaneraserana,
Na anaty toeram-pitsaboana, na ankalamanjana.
Ny asa fitsaboana, dia asa iray tena mendrika,
Hanampiana ny marary, hitraka, tsy ho rendrika ;
Ka hahitany fahasitranana, izay iriany mafy,
Vita eto an-toerana, tsy manery ho any an-dafy.
Ny asa fitsaboana, asa mila ny fandalinana ;
Ahitana tsara ny aretina, izay tokony hotiliana.
Hampiasana ny fanafody, tena mifanandrify ;
Ahazoana vokatsoa iainana, fa tsy mampitapify.
Ny asa fitsaboana, asa ilaina ny fahamarinana ;
Ka mila mijery tsara, ary atao am-pahamalinana.
Manara-maso akaiky, ny mety fivoaran'ny aretina,
Hisian'ny fahombiazana, sy ny sitraka ho arentina
Ny asa fitsaboana, asa tsy atao an-kevoana ;
Ny Tompo no manasitrana, ny marary eo anoloana.
Mila malemy paika, amin'ny fotoana fandraisana ;
Mampitony ny marary, fa tsy mampitondra faisana.
Ny asa fitsaboana, dia isan'ny asa tena sarotra ;
Asa tena fanompoana, tsy hisian'ny ady varotra.
Asa izay nosafidiana, tsy natao hampanan-karena ;
Fa asa mihaja, iandraiketana, amim-panetrentena.